महिलाले पुरुषमा खोज्छन् यी ५ कुरा ! प्रत्येक पुरुषले थाहपाउनै पर्ने ! - ramechhapkhabar.com – ramechhapkhabar.com
महिला र पुरुषको विचको स’म्बन्धको शुरुवात सबैभन्दा महत्व पूर्ण हुन्छ । महिला सामान्यतया पु’रुषमा केही कुरा खोज्छन् । यी कुरा पाए भने महिला पु’रुषसँगको स’म्बन्धमा खुशी र स’न्तुष्ट रहन्छन् । के कुरा चाहन्छन् त पु’रुषमा महिला ? मुस्कान:-राम्रो लुक र पहिरन पछि महिलालाई चाहिन्छ हँसिलो अनुहार । कुनै पनि पुरुष हँसिलो अनुहारसहित प्रस्तुत हुन्छ भने उप्रति महिला आकर्षित हुन्छे ।￼